Noma yikuphi owesifazane ngokushesha noma ngokuhamba kwesikhathi udibanisa nenkinga njengemizwa eguqukayo. Noma ngabe yimuphi umshado ojabulisayo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, uthando luyalala, awunamathuba okuba uthande uthando, uphinde uthukuthele umlingani wakho. Futhi esikhathini esinjalo udinga ukukwazi ukugcina umshado futhi uvuselele imizwa yakho, ukuze ubuhlobo bakho bungabe buhluleke ngokuphelele. Sizokunika amathiphu angu-10 ukuthi ungavuselela kanjani imizwa yakho kusuka kuma-psychologists awaziwa kahle, abakwa-sexologists, kanye nemibhangqwana eshadile esinezinkinga. Ngenxa yalezi zeluleko, ungasinda enkingeni yobuthakathaka futhi uvule ama-horizons amasha ebuhlotsheni bakho.
1. Bhodi indlela yokuvuselela imizwa yakho, lokhu kuyisini.
Ukuba omncane, ubulili bethu nomlingani buyingqayizivele, futhi lapho sikhulile siqala ukuvila. Sekukhulile, asisakwazi, njengasemusha ungalali ubusuku bonke uphakamise futhi ubheke ama-roses amasha ekuseni. Siqala ukuzwa kumuntu othandekayo mayelana nokubukeka kwamakhilogremu ethu engeziwe futhi ngenxa yalokhu sinezinkinga ezithile. Ukunakekela umndeni, sisheshe sikhathele futhi singaphuzi ngokuya ocansini, kodwa ngehora elilodwa lokulala okulindeleke isikhathi eside. Udinga ukwazi ukuthi ukwaneliseka ngokocansi kuxhomeke ekugculweni komshado wakho. Uma unelisekile ngobuhlobo bakho obuseduze, konke kuzobe kuhle kwezinye izindawo.
Uma konke kulungile ebuhlotsheni bakho bansuku zonke, bese ulala ocansini ngeke ube nezinkinga.
2. Iseluleko sendlela yokuvuselela imizwa yakho, thintana.
Thina besifazane kaningi senza iphutha elifanayo. Sibeka zonke izinto emahlombe omyeni wethu, njalo siveza ukunganeliseki kwethu, sitshela futhi sikhohlwe ngokuphelele ngothando. Khumbula lapho ukhona nomyeni wakho, uhamba ngaphansi kwenyanga noma ukhonza indebe yekhofi embhedeni? Labo abashadile abangakhohlwa ukubonisa ukuthambekela nokunakekelana akulokothi baphuze embhedeni kumlingani wabo.
Kumele ukhumbule ukuthi uma ubonisa ububele komunye nomunye, kuyomele uqine izibopho zakho zocansi.
3. Iseluleko sendlela yokuvuselela imizwa yakho, akufanele ulale ucansi, uma ukhathele.
Ngokuvamile kwenzeka ebuhlotsheni uma omunye wabalingani ekhathele futhi engafuni ukwenza ucansi. Ezimweni ezinjalo, akudingeki ukuba uziphoqe futhi wenze ucansi kuphela ngoba wesaba ukucasula othandekayo wakho. Zama ukuthola ukuyekethisa ezimweni ezinjalo futhi uzilungiselele ngempelasonto kusengaphambili, lapho ungaba nomunye futhi ujabulele ucansi ngokujabula okugcwele. Kumele ukhumbule ukuthi into esemqoka ayikho ngesilinganiso sobulili, kodwa ngekhwalithi yayo.
4. Bhodi ukuthi ungavuselela kanjani imizwa yakho, lokhu ukushiya zonke izinkinga ngemuva kombundu.
Ungagqoki izinkinga emsebenzini emsebenzini wakho. Futhi ungathathi umsebenzi ekhaya. Thumela izinkulumo zocingo nentombi, ehudula isikhathi esingaphezu kweyodwa. Uma usenamacala angaxazululiwe emsebenzini, futhi unquma ukuthatha imibhalo yendlu, ngakho-ke lolu suku aluhleli ubuhlobo obuseduze. Ngoba umcabango wokuthi awukwenzi lutho, ngeke uvumele ukuthi ukhululeke.
5. UMkhandlu ukuthi ungavuselela kanjani imizwa yakho, akufanele ukhohlwe ukutshela umyeni wakho ngezinhloso zakho.
Ungatsheli umyeni wakho ukuthi namuhla wanquma ukulala ngocansi. Zama ukumlungiselela lokhu futhi ngandlela-thile umtshele ukuthi ufuna ukummangaza namhlanje. Ngakho-ke, ungadlulisela isimo sakho sengqondo kumyeni wakho, okuyinto yena, ngokuqinisekile, ngokushesha uzizwa.
6. Ithiphi indlela yokuvuselela imizwa yakho, lokhu kuzama ukuhluka njalo.
Ngokuvamile, ukulala ocansini, sisebenzisa lezo cala, esicabanga ukuthi zingu-100%. Kodwa awuzange ucabange ukuthi uma sondla umuntu isikhathi eside ngokudla okufanayo, ekugcineni siqala ukusikhathaza. Ngakho ngocansi, zama ukuhlala uhlukile, zama ukuhlukanisa ubudlelwane bakho bobulili. Imenyu yakho kufanele ihlale ihlukile.
7. Iseluleko sendlela yokuvuselela imizwa yakho, lokhu akuyona ukuguqula umyeni wakho abe intombi.
Kumelwe ukhumbule ukuthi indoda akufanele ibe yintombi yakho, ngoba ngokuyinhloko indoda iyadingeka ukukhohliswa futhi ihlale inqobile. Awudingi ukutshela indoda ukuthi uthole kanjani ukhilimu, noma ukuthi uzuze kangakanani amakhilogremu engeziwe. Ungalindeli ukuthi umyeni uzoqala ukukutshela ukuthi uhle, ngokuvamile amadoda asezimo ezinjalo azithule. Baqala ukukholelwa amazwi akho nabo, kuba okungajabulisi ukulala nawe embhedeni owodwa. Khumbula uma wena, nje uhlangana, awuzange utshele umyeni wakho ngazo zonke izinkinga. Manje akufanele ukwenze lokhu manje.
8. Iseluleko sendlela yokuvuselela izinzwa zakho, ukwengeza amahlaya kancane ebuhlotsheni bakho.
Ukubuyisa isifuba esidala, udinga ukuhleka. Zama ukuhlangana nomyeni wakho uhamba nge-apron eyodwa. Cabanga ukuthi uzoba kanjani, umangale futhi uzohleka, ngoba lokhu wayengalindele. Uma ukuhleka komyeni wakho kulungile, ungesabi ukuzama into entsha. Futhi ungikholelwe, ubusuku obuvunguvungu buzoqinisekiswa kuwe.
9. Iseluleko sendlela yokuvuselela imizwa yakho, lezi yizinkumbulo zakho ezabiwe naye.
Uma unomuzwa wokuthi kube khona ukupholisa phakathi kwakho, thola izithombe zakho zakudala. Qala ukukhumbula nomyeni wakho zonke izinto ezinhle ezenzeka phakathi kwakho. Wena, ukhumbule zonke izikhathi zomngane wakho, uzomomotheka futhi uhleke. Futhi ngalesi sikhathi ungaziqonda ukuthi uyathandana, nomunye kanye nalapho uhlangana nje. Futhi emva kwalokho uzosuswa ebusweni bokuqala kothando lwakho kanye nesifiso sakho sokuqala. Futhi ngenxa yalezi zinkumbulo, uzoqala ukuthanda umyeni wakho kabusha.
10. Iphuzu elifana nokuvuselela imizwa yakho kudlala ngothando.
Sonke besifazane sakwazi ukudlala ngothando nabantu esingabazi. Kodwa kunzima kakhulu ukudlala ngothando nomyeni wakho. Ngenxa yezinkinga zomhlaba, sikhohlwe ngokuphelele ukuthi singabesifazane. Zama ukuthi ube sexy, ngoba uyazi kanjani. Uma uzohamba uvakashele endlebeni yakhe ngokuthi ubusuku bakho buyoba njani namhlanje. Uhlezi etafuleni, udwebe unyawo phakathi kwemilenze yakhe. Ukuhleka amahlaya akhe, kungenakuqondakala ukuthi abanye bamanga ngamehlo endlebeni, bamtshele ukuthi uyamncoma. Kufanele wazi ukuthi ukukhathazeka kwakho nemizwa yakho akuzange idlule noma kuphi. Uvele ukhohlwe okwesikhashana ukuthi usengumuntu ofanayo, futhi ungowesifazane.
Ngenxa yamathiphu ethu ayishumi, uvuselela izinzwa zakho futhi uhlukanise impilo yakho yobulili. Inhlanhla futhi ungesabi ukuzama!
Indlela yokuhlola uthando lweqiniso?
Ukuphila kabili: indoda nomthandi
Imibono yezipho zokuqala zomfana wokuzalwa
Indlela yokugcina uthando lomuntu?
Ukuphila nendoda engathandeki
Unyaka we-Tiger: i-horoscope yezilinganiso
Yini okufanele inikeze umamazala wami ngoNyaka Omusha?
Amathiphu okuthola umsebenzi
Ukusetshenziswa kwe-comfrey nobubanzi bokusetshenziswa kwayo
Izixazululo zokubamba izinwele zakuqala
Amasu okuqhuba ukubeletha okuqondile
Uma ngabe ingane yaqala ukuqamba amanga, kufanele ngenzeni?
Ngemuva kwesahlukaniso u-Victoria Daineko ubhalisiwe endaweni yokuphola
Umthelela wezithende eziphakeme ezempilo yabantu
Ukushayela ngenkukhu yesibindi
I-blepharoplasty yamajwabu angaphansi
Ukuthuthukisa imidlalo yengane eneminyaka eyodwa
I-Arthroscopy yehlangothini lamadolo, incazelo
Umkhonto omncane: hlobo luni lwezicathulo okufanele zigqoke